Posted by shiikha on 07/01/2016 11:18:33
Tababarkan oo ka furmay xarunta Gos waxaa ugu Horeyn ka hadlay Guddoomiyaha XSKK Cabdullaahi Nuur Maxamed Cadaani Waxuuna sheegay in tababarkan ay ka qayb qaadanayaan macalimiin laga soo xulay cayaartooyda cuslaatay , kuwa hada xirafada kuguda jira iyo Ardayda Jaamacaha wax ka barata isla markaana uu bixinayo Macalin Cumar Cabduqaadir Baarajab .
Guddoomiye Cadaani ayaa intaa ku daray in tababarka loogu diyaar garoobayo tababar heerka koowaad ah oo sanadkan gudahiias xirirka qaban doono isla markaana ay kasoo qayb qaadan doonaan macalimiin ka socota gobolada dalka, Waxuuna Mahad celin balaaran u soo jeediyay Macalin Baarajab isagoo macalimiinta kula dardaarmay in ay ka faa'iidaystaan Macalinka maadaama uu tababrka afkii hooyo lagu bixinayo taasna ay guul tahay.
Madaxa Amuuraha Gobolada Gos IBraahin Xuseen Cali Roombe horeyna u soo noqday guddoomiyaha XSKK oo goobta ka hadlay ayaa amaanay dadaalka xirirka iyo Macalin Baarajab ay ku doonayaan in ay xoogga saaraan tababarka macalimiinta oo ah halka ay kasoo bixi karaan macaliin soo saarta cayaartooy wanaagsan.
Macalin Baarajab oo xaflada ka hadlay ayaa sheegay in dalka uu xaq ku leeyahay talaabo kasta lagu horumarinayo kubada koleyga soomaliyeedna uu diyaar u yahay in uuka qayb qaato.
Macalin Baarajab ayaa dhanka kale sheegay in qorshahiisa kaliya aysan ahayn hal tababar uuna diyaariyay qorshe 2016- ilaa 2020 oo dhanka tababarka macalamiinta kubadda koleya uuna ku rajo weyn yahay inuu dhaqan geli doono.
Guddoomiyaha Gos Cabdulaahi Axmed Tarabi oo xaflada ka hadlay ayaa sheegay in barisamaadki ay kubabdda koleyga ku hormartay isku xirnaan wadatashi iyo kala faa'iidaysasho ka dhexaysay macalimiinta garsoorka iyo cayaartoodya taasna loo baahan yahay in dib loo soo celiyo , macaliinta tababarka qaadanayo laga doonayo in ay gartaan in masuuliyad culus ay saaran tahay.
Guddoomiye Tarabi ayaa dhanka kale amaan usoo jeediyay Madaxda Xiriirka oo waqti geliyay horumarinta kubadda koleyga qaybaheeda kale gedisan iyo Macalin Baarajab oo go'aansaday in aqoontiisa dalka dib uu soo celiyo.
Ugu dambeyn waxaa xaflada ka hadlay oo tababarka furay Guddoomiye sharafeedka Gos Cabduqaadir Ibraahin acan Abkoow waxuuna si qooto dheer uga sheekeeyay taariikhdii ay soo martay kubadda koleyga iyo qabkii ay ku hormartay waxuuna xiriirka kula dardaamay inay soo celiyaan taariikhdii wacnayd ee kubadda koleyga ku lahayd qaaradda afrika.
Tabarkan oo ay ka qayb qaadanayaan 35 macalin ayaa socon doona muddo 5 maalin ah waxayna macalimiinta qaadan doonaan xirfadaha kusoo kordhay kubadda koleyga oo cashar ahaan loo bari doono iyo tababar uu macalinka ku bixinayo garoonka Wiish oo qaab ficil ah loo barayo.